ဦးမင်းအောင်ကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးခေါ်သွားတယ် – Nyang Media
FB / တောင်ကုတ်မြို့နယ် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမင်းအောင်
လူတွေကို သေနတ်တွေနဲ့ ရိုက်တယ်ပေါ့။ သေနတ်နဲ့ ထောင်းတယ်။ လက်ပြန်ကြိုးတွေတုပ်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့ ရွာကလူတွေကိုရော၊ ဦးမင်းအောင်ကိုရော ရိုက်နှက်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင့်။ နောက်ပြီးတော့ …
ယနေ့ (၁၄ . ၁၀ . ၂၀၂၀) နံနက်က မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း လက်နက်ကိုင်လူတစ်စု၏ ဖမ်းဆီးခံရသော တောင်ကုတ်မြို့နယ် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမင်းအောင်၏ ဇနီး ဒေါ်မြဝတ်ရည်ကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – သတင်းကြားရတာ အထူးပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒီမနက်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကို ကြားသိရသလောက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျား။
DMWY – သူတို့က စည်းရုံးရေးထွက်သွားတာ သုံးလေးရက် လောက်တော့ရှိပါပြီ။ (၁၁) ရက်နေ့ ကတည်းက ထွက်သွားကြတာပါ။ ပထမဆုံး ကုလားယောင်၊ ကုလားယောင် ကနေ ပတင်းပေါ့။ ပတင်းမှာ နှစ်ရက်သုံးရက် ကြာပြီး ဒီနေ့မနက် မှာ ပတင်းကျွန်းကနေ ဖောင်းကားကျွန်းကို ကူးတာပါ။ ဖောင်းကားကျွန်းကိုရောက်တော့လည်း အေးအေးဆေးဆေးပဲလို့ သိရတယ်ရှင့်။ ပြီးတော့မှ ကျွန်မဆီကိုဖုန်းဝင်လာတယ်။ ကိုမင်းအောင်တို့အဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်။
ကျမကပြန်ပြောပါတယ်။ “ဟဲ့ . . ကိုမင်းအောင်တို့စည်းရုံးရေးသွားတာလေ။ ဘာကိစ္စနဲ့ဖမ်းတာလဲ” လို့တောင်ကျမပြန်ပြောလိုက်သေးတယ်။ ဒါနဲ့ ကျမလည်း ကိုမင်းအောင်ဖုန်းကိုလှမ်းဆက်တော့ ဖုန်းပိတ်ထားပြီ။ အခြားလူတွေဖုန်းကိုဆက်တော့လည်း ဘယ်သူ့ဖုန်းမှ ဆက်လို့မရတော့ဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားထားတာမျိုးရောရှိပါသလားခင်ဗျား။
DMWY – ရှိတယ်ရှင့်။ ရှိတယ်၊ ရှိတယ်။ ရဲစခန်းကတော့ လိုက်သွားပြီလို့ပြောတယ်လေ။ ရဲတွေကပေါ့။ တောင်ကုတ်မြို့နယ် NLD ဥက္ကဌ ဦးတင်သိန်းအောင်ကတော့ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။
စစ် အစိုးရခေတ်ကဆိုရင်လည်း နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ အဖမ်းအဆီးခံရ၊ ထောင်တွေကျပြီး ဘဝတွေ ဒုက္ခတွေအများကြီးခံခဲ့ရတာပါ။ ကျမတို့က ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲ နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီး တိုက်လာခဲ့တာ …
ငြမ်းမီဒီယာ – အခင်းဖြစ်ချိန် အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ဖောင်းကားကျွန်းက ဒေသခံတွေက ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြင်တွေ့ ရတာတွေကို ဘယ်လိုပြောပါသလဲခင်ဗျား။
DMWY – ဒေသခံတွေပြောတာကတော့ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ လူတွေ ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်။ ဓားအရှည်တွေလည်းပါတယ်။ အပြင်မှာ မနီးမနားကစောင့်နေတဲ့ လူတွေရောပေါ့။ ဆယ်ယောက်ကျော်တယ်တဲ့။ အားလုံးနီးပါးမှာ သေနတ်တွေနဲ့ပေါ့။ အထဲဝင်လာတဲ့တာကတော့ နှစ်ယောက်ပေါ့။ နောက်ပြီး လူတွေကို သေနတ်တွေနဲ့ ရိုက်တယ်ပေါ့။ သေနတ်နဲ့ ထောင်းတယ်။ လက်ပြန်ကြိုးတွေတုပ်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့ ရွာကလူတွေကိုရော၊ ဦးမင်းအောင်ကိုရော ရိုက်နှက်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင့်။ နောက်ပြီးတော့ ဦးမင်းအောင်ကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးခေါ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင့်။
ငြမ်းမီဒီယာ – နောက်ထက် ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ ထပ်ပြီးသိရပါသေးလဲခင်ဗျား။
DMWY – လောလောဆယ်တော့ ဘာမှတော့မသိရသေးဘူးရှင့်။ သူတို့ဖမ်းပြီးတော့ စပိဘုတ်နှစ်စီးနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိရသေးတယ်ရှင့်။
ငြမ်းမီဒီယာ – လာဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေကို ဒေသခံတွေက ဘယ်အဖွဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အရပ်စကားအနေနဲ့ခန့်မှန်းပြောကြတာမျိုးရောရှိပါသလား။
DMWY – ဘယ်အဖွဲ့လို့တော့ သူတို့မသိကြဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့်သူတို့လက်နက်ကိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်။ အဝတ်အစားတွေကလည်း အားကစားအင်္ကျီတွေဝတ်ထားတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်။ အရပ်ဝတ် ရိုးရိုးအဝတ်အစားတွေနဲ့လည်းပါတယ် လို့ပြောပါတယ်။
သူတို့က ဝင်လာကတည်းက သေနတ်တွေကိုတပြောင်းပြောင်းနဲ့ မောင်းတင်ပြီးဝင်လာကြတယ်လို့ပြောတယ်။ ဦးမင်းအောင်တို့က ထမင်းစားဖို့ပြင်နေကြတုန်းပေါ့။ အဲဒီထမင်းကျွေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အိမ်ကနေ ဖမ်းခေါ်သွားတာလို့ပြောကြပါတယ်။
အမျိုးသားတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး၊ နောက်ထပ်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း ဖမ်းသွားတယ်။ လက်နက်အားကိုးနဲ့ ဒီလိုလုပ် တဲ့ကိစ္စတွေကို ကျမတို့က ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ် …
ငြမ်းမီဒီယာ – တချို့က ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေကြတာတွေမှာ AA အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခေါ်သွားကြတာလို့ ပြောကြတာတွေကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာမြင်တွေ့လိုက်သူတွေနဲ့ အရပ်ထဲကလူတွေရဲ့ သုံးသပ်ပြောဆိုမှုက ဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျား။
DMWY – အခုက သူ (ဦးမင်းအောင်) တို့နဲ့ပါသွားတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ဖုန်းတွေကို သိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ အခုလောက်ပဲသိရတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကျမတို့ကိုဖုန်းဆက်တဲ့ တစ်ယောက်ကိုမေးတော့လည်း ဘယ်အဖွဲ့ကဆိုတာ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကပေါ့။ လက်နက်တွေ အများကြီးပါတယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးတော့သိရတယ်။
ဘယ်အဖွဲ့ဆိုတာတော့ သူတို့က ဝတ်စုံလည်းမဝတ်ထားဘူး၊ စာတွေလည်းမရေးထားတော့ မသိရဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊ ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်တဲ့အဖွဲ့ကပေါ့။ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တဲ့အဖွဲ့ကပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – ခုအချိန်မှာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရတာ အားနာမိပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ဒီသတင်းအတွက် ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ အခုကိစ္စအတွက် ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်တစ်ဦးအနေနဲ့ တစ်ခုခုပြောချင်တာရှိရင် ပြောပေးခင်ဗျား။
DMWY – ကျမအမျိုးသားက နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ အခုမှ လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုးအရင် စစ်အစိုးရခေတ် ကတည်းက နိုင်ငံရေးကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့လုပ်လာခဲ့တာပါ။ စစ် အစိုးရခေတ်ကဆိုရင်လည်း နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ အဖမ်းအဆီးခံရ၊ ထောင်တွေကျပြီး ဘဝတွေ ဒုက္ခတွေအများကြီးခံခဲ့ရတာပါ။ ကျမတို့က ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲ နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီး တိုက်လာခဲ့တာပါ။
နိုင်ငံရေးကို ငြိမ်းချမ်းစွာလုပ်လာ၊ တိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ လက်နက်မဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဒီလိုမျိုး လက်နက် အားကိုးနဲ့လုပ်တာကိုတော့ ကျမ တော်တော်ကို ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ နောက်ပြီး ကျမ အမျိုးသားတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး၊ နောက်ထပ်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း ဖမ်းသွားတယ်။ လက်နက်အားကိုးနဲ့ ဒီလိုလုပ် တဲ့ကိစ္စတွေကို ကျမတို့က ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ခုလိုဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ဦးမင်းအောင်အပါအဝင် ဖမ်းဆီးခံရသူတွေ အမြန် ဆုံးပြန်လွှတ်လာစေဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျား။
Tags: AA, NLD, ကိုယ်စားလှယ်, တောင်ကုတ်, လက်နက်ကိုင်